Ny Valosoa Vaovao 10 Febroary 2018. | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← 7 Février 2018 (Paris), Houcine Arfa a porté plainte… Alexandrine Rasolo, Balisama Razafimelisoa.
Ankadikely, Sabotsy Namehana, Ilafy-Fofikri, 10 Febroary 2018. Marc Ravalomanana. →
Ny Valosoa Vaovao 10 Febroary 2018.
Ny telo voalohany dia nifarana tamin’ny fifanarahana ihany ny adilahy politika na dia azo lazaina fa nety ho tamin’ny fihatsarambelatsihy ihany aza. Ity farany izay tena fanonganam-panjakana satria tamin’ny alàlan’ny basy aman-tafondro mihitsy no nandrombahana ny fahefana dia ireo nanongana indray no mankahala ny nahongany. Ny tena mahavariana amin’ny gasy dia ny nanjanaka an’ity Nosy ity nandritra ny enimpolo taona mahery dia hisolelafana sy handadiladiana na dia amana hetsiny aza ireo raiamandreny mpiray tanindrazana naripany tamin’ny 1947. Tsy midika velively izany fa tokony hankahalaina ny nanjanaka saingy tsy eken’ny fisainana kosa ny hoe samy Malagasy no mifankahala kanefa voaporofo fa tetika politika nentina niampangana an-dRavalomanana Marc no nitarihana ireo antokon’olona nanafika ny Lapam-panjakana etsy Ambohitsorohitra, mba hisy ny rà latsaka natao sorona.
Tsikaritra tokoa mantsy fa ireo rehetra nametraka fehezam-bonikazo teo dia tsy mba nisy na iray aza mba niezaka ny hamitra-pihavanana na namela ny heloky ny hafa. Tsy misy afaka miala amin’iny vono olona iny na iray aza satria Rajoelina Andry naniraka ny praiminisitra notendreny teny an-dalambe, Monja Roindefo, haka ny Lapan’Ambohitsorohitra. Ny filohan’ny AV7 ankehitriny dia na nosakanan’ny jeneraly Dolin tsy hihoatry ny tsipika aza dia tsy nanaiky fa niroso ihany. Ankehitriny dia nampiseho ny holatry ny nidiran’ny bala teo amin’ny tongony sy teo amin’ny lamosiny izy ary nanamafy fa avy ao Ambohitsorohitra ny tifitra. Nisy tovolahy nijoro vavolombelona toy izany koa. Ny mpitarika antoko Mapar, minisitry ny fitsarana tamin’ny tetezamita, kosa dia mbola naneho ny fankahalany an-dRavalomanana Marc ka nilaza fa fitsarana mahefa no nitsara azy ka tokony hampiharina ny didim-pitsarana nivoaka tamin’ny taona 2010. Olona mpitsara izany tsy tokony hitanila ary azo antoka fa teny midina avy any aminy ny didy navoakan’ny fitsarana.
Mahafantatra rahateo koa i Razanamahasoa Christine fa faritra mena Ambohitsorohitra ary na aiza na aiza eran’izao tontolo izao ka misy andian’olona manafika Lapam-panjakana izany dia tsy maintsy ireny no iafarany. Ny mpanao gazetin’ny RFI tamin’ireny fotoana ireny dia nanamafy fa tsy avy tao Ambohitsorohitra ny tifitra ary ny namaranany ny fanadihadiany dia: “à qui profite le crime”. Ny tantara no namely izany satria voaporofo fa Rajoelina Andry sy ny ekipany no nikotrika iny hetsika iny ary izy ireo niakatra teo amin’ny fitondrana. Ny sekretera jeneralin’ny antoko Monima io 7 Febroary 2018 io, rehefa nanatitra fehezambonikazo teo Ambohitsorohitra dia nanamafy fa “manohy ny tolona” ny antokony tarihan’ny praiminisitra voalohan’ny tetezamita, Monja Roindefo. Tsy mazava loatra ny tiany hambara satria niaraha-nahalala fa fotoana fohy ihany ny filohan’ny Monima no nitazona io toerana io. Sarotra tokoa amin’izao fotoana izao ny mametraka mazava ny toerana misy ny antoko politika isan’isany satria sady miseho manenjika sy manakiana ny mpitondra amin’izao Repoblika IV izao kanefa mankahala ny mpitarika antoko hafa manohitra ihany koa.
Araka izany dia tsy hisy hahatoky fa tsy hanambatra hery indray ireo politisiana manao adim-borontsiloza amin-dRavalomanana Marc ireo aoriana kely. Aoka ho ao an-tsaina mandrakariva fa rehefa mahatsiaro ny 29 Martsa 1947 ny Malagasy dia tsy misy mandranitra fankahalana frantsay ka nahoana no isaky ny 7 Febroary dia miezaka manenjika ny mpiray tanindrazana ny politisiana gasy?
Tetibolan’ny CUA mbola tsy mivoaka
Mety tsy handray karama ny mpiasan’ny CUA hoy ny SMKAR
Nanao fanambarana omaly ny Sendikan’ny Mpiasan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (SMKAR), tamin’ny alalan’ny sekretera jeneraliny, Mamy Rafanomezantsoa. Mikasika ny tetibolan’ny Kaominina mbola tsy mivoaka atao fanamarinana ny maha-ara-dalàna azy na tsia, na ny antsoina hoe contrôle de légalité, any amin’ny Préfet de Police hatramin’izao no ipetrahan’ny ahiahian’izy ireo izao.
Araka ny fanadihadiana nataon’ny sendikà hoy izy, efa tamin’ny volana desambra 2017 no vonona ny tetibolan’ny Kaominina Antananarivo Reniovohitra, nilaza anefa ny Préfet de Police tamin’izay fotoana izay fa tokony hahemotra volana janoary 2018 no fandaniana azy, miansdry ny fahalanian’ny tetibolam-panjakana aloha. Lany tamin’ny volana janoary teo izany tetibolan’ny CUA izany ary efa nalefa any amin’ny Prefektioran’ny Polisin’Antananarivo, hatramin’izao anefa mbola tsy nivoaka ny fanakianan’ny Préfet, na ekena na tsia ny maha-ara-dalàna izany tetibolan’ny CUA izany. Efa ho 1 volana sy tapany arak’izany ny CUA no tsy manana tetibola, noho izay antony izay, tsy afaka mampiditra na mamoaka vola ny mpitantana.
Ahiana arak’izany hoy ny SMKAR ny tsy handraisan’ny mpiasan’ny CUA karama amin’ity volana febroary ity noho izay antony izay. Isaaorana kosa anefa hoy izy ireo ny DCP, na ny Direction de la Comptabilité Publique, nanome alalana manokana na dérogation tamin’ny volana janoary teo, ka nahafahan’ny CUA nandoa ny karaman’ny mpiasa. Miantso ny tompon’andraiki-pqnjakana ny SMKAR tsy hampiditra resaka politika ity resaka tetibola ho ampiasain’ny CUA amin’ity taona 2018 ity fa lasa sorona ny mpiasa sy ny vahoaka hoy izy ireo.
Raha tsy handray karama ny mpiasa dia hiantraika amin’ny vahoaka izany, ny Kaominina dia manao asam-bahoaka koa hoy ny SMKAR.
Manapotika an’i Madagasikara ihany koa ny HVM
Samy mahita ny rehetra ankehitriny fa potika ny Firenena Malagasy izay fahavoazana amin’ny lafiny maro sady mahafaoka be . Tsy misy rahateo ny fahasimbana fa tsy maintsy eo ny mpanapotika . Ny zavatra takian’ny vahoaka anefa dia ny vahaolana azo tsapaintanana manoloana ny fahavoazana izay iainana ankehitriny ka ny fanjakana no tokony hanolotra izay vahaolana izay fa tsy hitsambikina any amin’ny tsy hita maso toy ny taona 2030 .
Tsy vonona ny handray andraikitra mihitsy Rafanjakana fa ny fanilihana sy ny fanadiovan-tena hatrany no mivoaka ny vavany . Isak’izay miteny ny mpitondra dia lazaina fa ny fitondran’i Ravalomanana no nahatonga an’izatsy sy zaroa . Tsy hitanisa olana no tadiavin’ny malagasy amin’ny mpitondra fanjakana fa ny hamaha izay mianjady aminy . Maro ny milaza fa tsy vitan’ny tefy maika ny fanarenana eto Madagasikara fa mila fotoana maro sy miainga amin’ireo mpitondra . Tsy mora ohatra izany manarina toetsaina lomorona izany saingy tsy taitra ireo nampindramin’ny vahoaka fahefana fa ny any amin’ny 2030 indray no mahamendimendy azy .
Inona anefa ny zavamisy ? Potika ny Toetsaina , Potika ny Tontolo iainana , Potika ny Soatoavina Malagasy , Potika ny Fihavanana , Potika ny Fahendrena Malagasy , Potika ny Fanahy no olona , Potika ny Toekarena , Potika ny Fotodrafitr’asa , Potika ny Sosialim-bahoaka , Potika ny tokantrano Malagasy noho ny Krizy , Potika ny Vakoka sy ny maro tsy voatanisa ! Tsy vita mora ny fanarenana fa mitaky taona maro sy olona vonona atosiky ny fitiavan-tanindrazana . Ny vahoaka mandritra izany dia very Fanahy mbola velona toy ny valala voatango , toy ny Rafotsibe very laona ka miandry izay higadonany . Tsy mendrika ny vahoaka malagasy izany . Mety tsy taitra ny mpitondra fanjakana tarihan’ny Hvm manoloana izany rehetra izany satria heveriny fa rehefa handefasana mpitandro filaminana mirongo basy ilay vahoaka dia mipirina . Mety ho marina angamba izany satria difotry ny fahasahiranana ny vahoaka saingy ny tsy fantatry ny mpitondra dia rehefa taitra io vahoaka malagasy io dia tena manahirana sady mahavita zavatra tsy azon’ny saina eritreretina .
Ny tsapa mantsy dia toa mahatoky tena be ny mpitondra fanjakana fa mety hono ny ataondry zareo . Ho hita eo ny tohiny fa ny fahagagana dia tsy misy fa izay nafafinao ihany no tsy maintsy ho jinjaina atsy ho atsy, sa ahoana hoy ianao ?
Sarangan’olona rehetra mihitsy no mitondra faisana amin’ny fitondrana HVM
Tsy milamina i Madagasikara! Izay no azo amehezana ny trangan-javatra miseho eto Madagasikara amin’izao fotoana. Raha toa ka miady mafy amin’ny fiainana sy ny fidangany ny vahoaka maro an’isa dia mitaintaina amin’ny asan-jiolahy sy ny dahalo ny Malagasy mba tsaratsara fiainana ary mitaintain-dava amin’ny fakana an-keriny ireo gasy mpanam-bola tampoka sy ireo teratany karana eto Madagasikara.
Saika ny sarangan’olona rehetra mihitsy araka izany no mitondra faisana amin’izao fitondrana HVM izao, ary tsy mahita rirany ihany koa ny mpanao politika hafa fa hiharan’ny antsojay isan-karazany raha vao mihetsika, kanefa ny antokon’ny fitondrana tsisy hapoaka amin’izay sehatra rehetra hisehoany. Isan’ny manaraka akaiky izany raharaham-pirenena izany hatrany i Pr Harimalala Joseph, izay tsy mitsahatra ny mampita hafatra ho an’ny mpitondra nohon’ny hagegena diso tafahoatra ataon’izy ireo eo amin’ny fitondrana. Amin’ity androany ity dia ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Salamo 55: 12 – 14 no hitondrany ny fanehoan-keviny, manao hoe: “Fa tsy fahavalo no manaratsy ahy, fa raha izany dia niaritra ihany aho; tsy olona nankahala ahy no nanandra-tena namely ahy, fa raha izany dia niery azy aho; fa hianao, lehilahy mitovy saranga amiko, namako sy sakaizako indrindra, dia isika izay nifankamamy resaka ka niara-nandeha tamin’ny maro ho ao an-tranon’Andriamanitra”. Araka io tenin’Andriamanitra io dia miantefa amin’ny filoham-pirenena ny hafatra hoy ity mpandinika ity ka nilazany fa aoka re tompoko mba tsy hirediredy amin’ny vina 2030 ianao raha toa ka mihevitra fa mba kristianina ihany, satria tokony ho nialoha ny nilatsahanao ho kandida ho filoham-pirenena no namaritanao izany vina izany raha toa ka nihevitra ny hampandroso an’i Madagasikara tokoa ianao.
Sa kosa ve efa mihevitra ianao fa mbola ho ianao no hanohy izao fahefana fambotriana vahoaka izao, ka ho hatramin’ny 2030? Raha izany mantsy no heverinao fa fisandratana ho an’ny fampandrosoana an’i Madagasikara dia fisandratana mankany amin’ny fandringanana ny Malagasy no tetikao, ary efa hita taratra etsy sy eroa amin’ireo karazana antsojay hataonao amin’ny mpandraharaha Malagasy, indrindra fa ny filoha Ravalomanana Marc amin’izao fotoana izao. Satria ny tenin’ny tompo ao amin’ny Ohabolana 27: 1 dia manao hoe: “Aza mirehareha ny amin’ny ho ampitso hianao; fa na dia ny havoakan’ny anio aza tsy fantatrao”. Noho izany dia ianao filoham-pirenena no tokony haneho ohatra velona amin’ny fihavanana ka hanana fanetren-tena mba hifanatona amin’ny hafa, indrindra fa ny filoha Ravalomanana mba ho ohatra velona ho an’ny mpanao politika, fa raha tsy izany dia ho avy aminao ny firehetan’ny fahatezeran’Andriamanitra araka ny ambaran’ny Matio 24: 48-51 manao hoe: “Fa raha manao anakampo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe: maharitra ela ny tompoko ka dia mikapoka ny mpanompo namany izy ary mihinana sy misotro amin’ny mpimamo, dia ho avy tampoka ny tompon’izany mpanompo izany amin’ny andro izay tsy ampoiziny sy amin’ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahiny roa izy ka homeny anjara any amin’ny mpihatsaravelatsihy; any no hisy fitomaniana sy fikotroha-nify”.
Noho izany tompoko, hoy hatrany ity mpandinika ity dia miandry fatratra ny hisian’izay fihavanana marina tsy hisy fihatsaram-belatsihy eo aminareo filoha roalahy ny Malagasy fa tsy ho fihatsaram-belatsihy lava isaky ny mihaona amin’ny hetsiky ny fiangonana hatrany no hasehonao, amin’ny maha mpiara-manompo anareo ao amin’ny sahan’ny fiangonana iray. Koa am-pitiavana Andriamatoa filoha no hiangaviana anao raha tsy te hangidy hoditra amin’ny vahoaka maro an’isa ianao sy ny manodidina anao dia atsaharo ireo fihetsika tsy voahevitra ataonao amin’ny filoha Ravalomanana sy ny mpomba azy, satria vao mainka mampiredareda ny fitiavan’ny olona azy hatrany ny antsojay rehetra ataonareo aminy na any Andranomanelatra izany na ao Antananarivo, fa hianareo kosa dia mihena andro aman’alina ny fitiavan’ny olona anareo, izay voaporofon’ny hetsika ataonareo anie izany e!
Aoka Andriamatoa filoha ho fantatrao raha tsy ampahafantarin’ny manodidina anao anao izany, fa ny mpitandro filaminana irery sisa anie no miaro io fanjakanareo io fa tsy misy fahefam-bahoaka miaro sy tia an’io intsony eto fa sao voafitaka ianao ka ho tratra farany eo e! Am-bava homana am-po mihevitra Andriamatoa filoha izay hafatra izay hoy ihany Pr Harimalala Joseph.
Tsy an’ny HVM sy ny fitondrana ny TVM fa an’ny vahoaka Malagasy rehetra
Faniry Razafy : fa an’iza marina ny TVM e ? An’ny vahoaka sy ny firenena Malagasy sa an’ny HVM sy ny fitondrana ankehitriny. Ny JT 13h 00 androany 08/02/18 izany dia ny vaovaom-pitondrana sy resaka HVM no mibahana. Lavitry ny vaovao misokatra sy mivelatra tsy misy fitongilanana ho an’ny sehatra rehetra. Aiza ve ka Fitokanana Quartier General ny HVM SAVA sy fivorian’ny HVM Tarihin’ny VpN no mahazo minitra maro. Avy eo indray Tournoi Foot nataon’ny HVM Alaotra Mangoro (Ady Omby Matavy). Tsy vitan’izay fa hatramin’ny fanomezana vadina Senatera HVM Tany Ampanihy Andrefana dia mbola iny fa mandeha. F’angaha tsy misy vaovao important mihoatra ireny na antoko hafa tokony hisitraka ny vaovaon’ny TVM ankoatry ny HVM eto ? Hatramin’ny Feon-gazety amin’izany dia ny Gazety mpanohana sy mpomba ny HVM sy ny fitondrana no lohalaharana vakiana : Triatra, La ligne de mire, La Dépêche, Akon’i M/car … vita ireo vao mba mamaky gazety hafa. Mahaiza maka lesona e … sao lahy hanenenana … Efa filma nandeha novidian-dafo anie io ataonareo io e. Tantara mitohy !!!
Germain Nomenjanahary : fadio ilay mandoro sy mandroba fa tena tsy mety na tezitra aza enao, tsy hoe tezitra @ zava-misy ao @nao ianao dia ny tranonao no ho dorana!!! tsy mety fa mitaiza toetsaina ratsy izany.
Noro Randriamparany : An’ny Hvm io zao dia rehefa tonga koa ny manaraka dia an’izay eo ndray e! Snif…..
Perline Vavy : Hery sy Voahangy Mianakavy no tompony eeee, hihihihihi!!!
Olga Radonaa : ianao bola tia mijery Tvm, zahay efa amantaona maro tsy mba mahafantatra zany Tvm izany tsy mba misy fandaharana fantatro @ io Tvm io satria television tsy matihanina, tsy pro ee!!
Mampiteny ny moana ny vidim-piainana
Na natao aza ny tsy hiteny dia hoy ny fitenenana hoe : mampiteny ny moana ! Ny vidim-piainana no tiana hambara amin’izany, indrindra ny zavatra ilain’ny mponina amin’ny fiainana andavanandro . Aiza kosa ve dia hatramin’ny anana avy no tsy laitra vidiana intsony , tany amin’ny 2 taona lasa ohatra dia mbola mahavita izay vitany ny 400 na ny 500 Ar raha toa ianao ka hividy anana , fa ankehitriny kosa amin’izao fitondrana tantanin’ny Hvm izao dia 1000 Ariary vao miteny . Dia aiza no iainan’ilay Gasy kely amin’izany Rafanjakana a ! Ny vary mandritra izany mba nidina kely ny vidiny saingy mbola manodidina ny 2000 Ar izay tsorina fa tsy zakan’ny sarambabem-bahoaka ; ny vidin’ny karaoty moa dia tsy lazaina intsony fa tena midangana .
Mafy ny mahazo ilay Malagasy satria rehefa miakatra ny vidim-piainana dia mihena toy izany koa ny any anaty vilany . Dia aiza ilay mpitondra mandritra izany ? Tsotra ny valiny ! Aoka tsy ho hadino fa ny ankamaroan’ny olona ambony eto amin’ny firenena anie ka tsy mividy zavatra eny rehetra eny fa any amin’ny tranombarotra lehibe e ! Ka inona moa no dia hivakian’izy ireo loha amin’izany? Ao ny mandany 1 tapitrisa Ariary farafahakeliny rehefa miantsena, fa ianao ilay vahoaka tsotra kosa mitsongoloka eny amin’ny tany mividy anana sy angivy . Ny dikan’izany dia mibaribary loatra ny elanelana eo amin’ny samy Malagasy .
Misy ny halatra amin’ny endriny maro eto Madagasikara fa tsy ny asan-dahalo sy ny vaky trano sy ny sintomahery ihany . Resabe ankehitriny ny momba ny tsenam-barotra eo anivon’ny fanjakana (marché public) satria mampiteny ny moana ny vidin-javatra sasany izay vidiana amin’ny volam-panjakana . Misy anefa ny rafitra mpanaramaso ny volam-panjakana izay mampametram-panontaniana hoe : afaka miasa araka ny tokony ho izy ve io rafitra io ? Tambazotra maro no misy eto amin’ny firenena Malagasy amin’ny fanaovana afera maloto, izay afera tsy vitan’ny olon-tsotra ny manao azy, fa tsy maintsy olona manana fahefana na farafaharatsiny misongadina eo amin’ny fiarahamonina no manao izany . Dia maninona ary raha izany olana marobe izany no itadiavan’ny fitondrana tarihan’ny Hvm vahaolana, fa tsy lany andro manenjika an-dRavalomanana sy miady amin’ny Kaominina (CUA) izy ireo? Raha ny fahitana azy dia ny fitsinjovana ny ho aviny no mahamaikla ireo ao anatin’ny fitondrana ankehitriny satria mandalo ny fahatongavana eo amin’ny fitondrana .
Mazava anefa ny hevitry ny maro fa tsy natao hitadiavana harena ny fananana andraikitra eo amin’ny fanjakana ary izany fanjakana izany dia natao hanompo fa tsy natao hotompoina, sa ahoana hoy ianao ?
Manakiana ny fomba fiasan’ny ben’ny tanànan’Antsirabe
Nitafa fohy tamin’ny mpanao gazety ny tolakandron’ny Alakamisy 8 Febroary 2017ny mpikambana eo anivon’ny filan-kevitry ny tananan’Antsirabe, avy amin’ny antoko TIM. Manoloana ny fampandrosoana ny tananan’Antsirabe ny foto-dresaka, izay ambaran’izy ireo fa tsy mandeha amin’ny laonina tateraka izany. Nisy lanonana nisesy mantsy nataon’ny mpanatanteraka di any fifampiarahabana tamin’ny sefo fokontany, narahiny fizarana tambin-karama tamina hotely lehibe iray teny Andraikiba. Taorian’izay dia nisy ihany koa fifampiarahabana teo amin’ny mpanolontsaina indray ka hotely lehibe ihany koa no nanaovana izany ary tamin’io dia nanambarany filohan’ny mpanolontsaina sy ny Ben’ny Tanana fa manga ny lanitra eo amin’ny roa tonta hoan’ny fampandrosoana. Nandiso tanteraka izany moa ireto mpanolontsaina TIM ireto satria nambaran’izy ireo fa maro ny zavatra mandeha eto Antsirabe no tsy nandalo fankatoavan’ny mpanolontsaina izany mihitsy, na tsy nampahafantarina azy ireo mihitsy aza rah any marina.
Notsahivin’ireto mpanolontsaina ireto fa efa nisy ny fangahana fanazavana momba ny fitantanam-bola nataon’ny mpanolontsaina saingy nanjavona ny fangatahana rehefa tonga teny amin’ny Prefektiora ary tsy nisy tohiny. Efa nisy ny fanadihadiana lalina nataon’ny teo anivon’ny tahirim-bolam-panjakana ka nahitana fanjavonana vola amina miliara, saingy tsy nasian’ny fanjakana resaka ihany koa izany ka mahatonga ireto mpanolontsaina ireto mandiso ny fanambaran’ny Ben’ny Tanana. Isan’ny nambaran’ireto mpanolontsaina ireto fa misy asa goavana, ambara fa tetikasan’ny filoham-pirenena eto Antsirabe ary nirotsaka ao amin’ny kitapom-bolan’ny kaominina ny vola, kanefa tsy nampahafatarina ny mpanolontsaina izany fa dia tantanan’ny Ben’ny Tanana irery ka tsy fantatra izay fandehany. Fa etsy andaniny dia isan’ny nanairan’ireto mpanolontsaina ireto ny fitondram-panjakana ihany koa fa raha nny tokony ho izy dia 6 no isan’izy ireo saingy ny iray candida tamin’ny fifidianana senatera ka naka “disponiblité”, kanefa hatramin’izao dia tsy averin’ny Prefektiora amin’ny andraikiny ilay olona taorian’ny fifidianana.
Etsy andaniny moa dia miha rava avokoa ny fotodrafitrasa misy eto Antsirabe amin’izao fotoana raha tsy hiteny afa tsy ny lalana izany, izay manerana an’Antsirabe moa izany. Ny mpiasa moa dia efa 8 volana izao no tsy nadray karama satria ny volana Mey 2017 ny karama farany noraisin’izy ireo raha toa ka 3 volana no tsy voaloha tamin’ny andron’ny Délégasiona manokana. Ireo rehetra ireo moa no hilazan’ny mpanolontsaina avy tamin’ny TIM ireto fa tsy mazava sy mangarahara ny fitantanana ny tananan’Antsirabe saingy takonan’ny Ben’ny Tanana amin’ny alalan’ny fisehosehoana amin’ny fahitalavitra sy haino aman-jery fotsiny izany ka tsy “possible”, ny hanaovana filamatra ny tananan’Antsirabe amina resaka fitantanana izany, arak any nambaran’ny Ben’ny Tanana.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Gazety Valosoa Vaovao, Marc Ravalomanana, Ny Valosoa 10 Fevrier 2018. Ajoutez ce permalien à vos favoris.